गरिमासँग संक्षिप्त कुराकानी | News Filmy
गरिमासँग संक्षिप्त कुराकानी
'गर्लफ्रेन्ड बनेर आएका ‘मिसयुज’ हुन्छन् अनि हराउँछन्'
गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउने पहिलो नेपाली नायिका भएकी छन्। सती प्रथामाथि बनेको यादव भट्टराई निर्देशित झोला फिल्म २०७० सालको व्यावसायिक रुपमा सफल फिल्म हो। डेढ दर्जन फिल्ममा अभिनय गरेकी तनहुँ बराहीकी गरिमासँग हिमाल खबर पत्रिकामा ऋषिराम कट्टेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी साभार सहित तपाईका लागि ।
सार्ककी सर्वोत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड जित्दा कस्तो महसूस भयो ?
मैले अवार्डको खासै आशा गरेकी थिइनँ। म एकदमै हिट हिरोइन पनि हैन, तर कामप्रति इमानदार र मिहिनेती भएकीले राम्रो प्रतिफल पाएको ठानेकी छु। मलाई लाग्छ, यो अवार्ड मभन्दा बढी नेपाली नायिकाले र नेपालले पाएको हो। यसमा म अत्यन्तै खुशी छु।
झोला हिट भएपछि त तपाईंलाई कामको मारामार छ, हैन ?
झोला को सफलता अनि त्यसमा मैले गरेको भूमिका र अभिनयका कारण निर्माता/निर्देशकले विश्वास गरेका छन्, काम पाइरहेकी छु। भर्खरै ठूली सकें, अहिले शम्भु प्रधानको रंग वैजनी मा काम गरिरहेकी छु। एउटा फिल्मको सफलताले ठूलो काम गर्दो रहेछ।
भनेपछि, झोला जस्ता सिनेमा अझ बन्नुपर्छ ?
झोला नेपाली समाजको यथार्थ र इतिहास हो। यस्ता फिल्म पक्कै बन्नुपर्छ। तर, यसको अर्थ सबै यस्तै खाले बन्नुपर्छ भन्ने हैन। अहिले निर्देशक बन्ने रहरेहरु धेरै छन्, तर यस्ता विषयमा फिल्म बनाउन गहिरो अध्ययन चाहिन्छ, नत्र डुबिन्छ।
नेपाली फिल्म कता जाँदैछ?
पहिले माया–प्रेमका एकै खालमा सूत्रबद्ध फिल्म बन्थे, अहिले विषयवस्तु धेरै फैलिएको छ। फरक विषय र स्वादका फिल्म बनिरहेका छन्। फिल्म पढेेका राम्रा निर्देशक आइरहेका छन्, विदेशी फेस्टिभलमा नेपाली फिल्मको उपस्थिति बढ्दो छ। यसबाट नेपाली फिल्मले सही बाटो समातेको देखाउँछ।
नेपाली फिल्ममा आएका नायिका किन हराइहाल्छन् ?
प्रतिभाका बलमा आएका मिहिनेती टिक्छन्, गर्लफ्रेन्ड बनेर आएका ‘मिसयुज’ हुन्छन् अनि हराउँछन्। हिरोको कुरा पनि त्यही हो। पैसा हालेर हिरो भएका एक–दुई वटा फिल्मपछि हराउँछन्। पहिला जस्तो सानो बजार र थोरै फिल्मकर्मी छैनन् आज। चुलिंदो प्रतिस्पर्धामा टिक्ने साधन भनेको प्रतिभा र मिहिनेत मात्र हो।
हिरोइन गरिमा पन्तसंग राष्ट्रपति यति धेरै प्रभावित
‘भाउ बढेको होइन’ : गरिमा पन्त